Fe भावनाहरू जुन कि नारिसिस्टहरू उनीहरूको पीडितमा निर्माण गर्न चाहन्छन् - Narcissists
Fe भावनाहरू जुन कि नारिसिस्टहरू उनीहरूको पीडितमा निर्माण गर्न चाहन्छन्
मादक पदार्थहरु संग सम्बन्ध जटिल, अनौंठो, र विषाक्त छ।
किनभने त्यहाँ कुनै 'साधारण' बन्धन छैन, तर आघातमा आधारित एउटा (यसको उत्पत्ति, धेरै जसो अवस्थामा, एक वा दुबै आमा वा बुबा र / वा हेरचाहकर्ताहरू सँगको एक दर्दनाक बचपनको अनुभव संलग्न छ) जुन पहिचान गर्न र निको पार्न गाह्रो छ।
त्यो हो, शिकार अनजाने एक साथी छनौट गर्दछ जो आफ्नो आमा / बुबाको प्रक्षेपण हो। तिनीहरू बिना शर्त प्रेम खोज्छन् जुन बाल्यावस्थामा दिइएको थिएन।
यद्यपि, नारसिस्टको साथ, स्पष्ट रूपमा यो प्रेमको प्रस्ताव आउँदैन।
डेभिड डोब्रिक र नेटली नोएल
यसको विपरित, शिकारले दुर्व्यवहार / दुर्व्यवहारको दोहोर्याई अनुभव गर्दछ जुन उनीहरूलाई बचपनमा भयो।
कहानी फेरि र अधिक दोहोरिन्छ, सम्बन्ध पछि सम्बन्ध, जब सम्म पीडित को यात्रा मा शुरू हुँदैन रिकभरी र चिकित्सा ।
Narcissists आफ्नो पीडितहरुलाई एक अलग तरिका महसुस गर्न को लागी उनीहरुलाई अलग र असहाय राख्न प्रयास गर्दछ।
मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिले यी भावनाहरूलाई पीडितमा उक्साउँदछ, तिनीहरूलाई पीडितको दिमागमा निर्माण गर्दछ।
कुनै पनि उपचार हुनु अघि, पीडितले यी भावनाहरु आफ्नै होइन भनेर स्वीकार्नु पर्छ। तिनीहरूले तिनीहरू के हुन् भनेर उनीहरूले हेर्नुपर्दछ - तिनीहरूको खुट्टाको बडीमा साins्ला र बाँधको जेलको उनीहरूको दिमागको विन्डोमा बारहरू।
केहि सब भन्दा शक्तिशाली भावनाहरु समावेश:
आन्तरिक रूपले, मा निषेधकर्ताहरु धेरै लाज महसुस गर्छन्। श्रेष्ठता को छवि अन्तर्गत र भव्यता त्यहाँ एक 'गरीब आत्म' छ जो रुन्छ।
तिनीहरू लाज र अपूर्णताको यी भावनाहरू अरूसँग सामना गर्छन् ताकि तिनीहरूसँग सामना गर्न।
विशेष रूपमा, एक व्यक्ति त्यो लाज प्रतिनिधित्व गर्न छनौट गरियो। यो सामान्यतया कोही जो मादकत्वको नजीकको नजिक र पूर्ण निर्भरताको स्थितिमा हुन्छ, चाहे यो वास्तविक हो, छोरा वा छोरी जस्ता, वा पीडितले जस्तो महसुस गरेको छ, जस्तै पार्टनर, एक कर्मचारी, वा एक मित्र ।
ऊ / उनी यो बयानका साथ यो लाज प्रोजेक्ट गर्दछ कि सन्देश सन्देश दिन्छ कि लक्ष्य अपर्याप्त, दोषपूर्ण, र प्रेमको अयोग्य हो।
नारिसिस्टहरू धेरै राम्रो हेरफेरकर्ताहरू हुन् र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र सम्बन्धमा माथिल्लो हात राख्ने क्रममा पीडितहरूलाई दोषी महसुस गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
यो सन्देश सुनाईएको छ कि पीडितले उसलाई केहि नराम्रो चीजको लायक छ कि उनी / उनी नारिसिष्टको धेरै णी छन्, वा उनको व्यवहारले उनीहरुलाई सजाय दिन 'बाध्य पार्छ'।
गल्ती पीडितको जस्तो देखिन्छ जस्तो बनाएर, मादक पदार्थ सेवनकर्ता आफैंको व्यवहारलाई धेरै छानबिनमा आउनबाट जोगाउँदछ।
नारिसिस्टहरू बिग्रेका बच्चाहरू जस्ता हुन्छन् जसले उनीहरूको बाटो जान चाहन्छन्। जब पीडितले एक राय दिन, आफैलाई व्यक्त गर्ने, वा असहमत हुने प्रयास गर्दछ, माथिको नक्कल गर्ने व्यक्तिले उनीहरुमा आत्म-शंकाको भावना खेती गर्ने छ, ताकि उनीहरु आफ्नै धारणा र विश्वासमा भरोसा गर्न सक्दैनन्।
यसलाई प्राप्त गर्न, नारसिसिस्टले उपकरणहरू काम गर्दछ पेट्रोलिंग , मौखिक / भावनात्मक दुरुपयोग, मौन उपचार , र शब्द सलाद।
नारिसिस्टहरू धेरै आश्रित व्यक्तिहरू हुन्, जो अरूले प्रदान गरेको नारिसिस्टीक आपूर्तिलाई खुवाउन आवश्यक छ।
यसैले, उनीहरूले एक कल्पना सिर्जना गर्छन् जसमा शिकारलाई उनीहरूको आवश्यक हुन्छ, जब वास्तवमा अधिक निर्भर व्यक्ति नारसिसिस्ट हो।
'तपाईं म बाहेक केही होइन,' जस्ता वाक्यहरू '' कसले तिमीलाई माया गर्दछ यदि यो म नभएको भए? ' वा 'हामी टुटेनौ भने तपाईं कहाँ जानुहुन्छ?' को भावना निर्माण गर्न हो cod dependency ।
कुनै नरसिसिष्टसँग कारोबारको ग्रे रक विधि जब कुनै सम्पर्क विकल्प छैन
एक नारसिसिस्टसँग कसरी डील गर्ने: काम गर्ने ग्यारेन्टी मात्र विधि
एक नरिसिस्टलाई कसरी चोट पुर्‍याउने उनीहरूले तपाईंलाई चोट पुर्याए
एक नर्सिसिस्टको Mas मास्क (र कसरी उनीहरूलाई हाजिर गर्ने)
प्रेम बमबारी: एक प्रारम्भिक चेतावनी स That्केत कि तपाइँ एक नारसिस्टलाई डेट गर्दै हुनुहुन्छ
पछाडि संयन्त्रहरू जब एक Narcissistic साथी पछाडि
नारिसिस्टहरूको साथ, सम्बन्धहरू नियन्त्रण र सबमिशन / वर्चस्वमा आधारित छन्।
तिनीहरू निरन्तर अर्को व्यक्तिबाट भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू खोज्छन् भनेर निश्चित गर्न उनीहरूलाई कुन “बटनहरू” पुश गर्ने भनेर निश्चित छ। यस तरिकाबाट तिनीहरू प्रतिक्रियालाई इच्चीप गर्न सक्दछन् अर्को व्यक्तिको सँधै पछाडि खुट्टामा।
तिनीहरूसँग आफ्नै समाधानको पनि धेरै समाधान नभएको क्रोध / क्रोध छ कि तिनीहरूले पीडितलाई आफ्नै राहतको लागि फ्याँकिदिनेछन् र सम्बन्धमा थप नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ।
डोनाल्ड ट्रम्प छोरा ब्यारोन कती अग्लो छ
नर्सिस्टहरू अतुलनीय पूर्णतावादी हुन्छन्, केहि पनि सन्तुष्ट छैन। तिनीहरूसँग अनुकम्पा र आफु र संसारको जस्तो स्वीकृति छ।
पूर्णताको कल्पनाको खोजीमा, तिनीहरू विनाशकारी हुनेछन् र उनीहरूको वरिपरिको सबै चीजको बारेमा आलोचनात्मक हुनेछन्, विशेष गरी सिकार।
पीडित, जब सम्म उनीहरूले वास्तवमै के हुँदैछ भनेर बुझ्न सुरू नगरे सम्म, त्यो पूर्णता हासिल गर्न कोशिस गर्नेछ, अन्तमा, माथिको मादक पदार्थ द्वारा प्रेम गरिन्छ।
नार्सिसिस्टको अहंकारले उनीहरूलाई उनीहरूको सम्बन्धमा पूर्ण नियन्त्रण खोज्छ। यस नियन्त्रणलाई प्राप्त गर्ने एउटा तरिका भनेको पीडितको आत्मसम्मानलाई कमजोर पार्नु हो ताकि ऊ / उनी शान्त, आज्ञाकारी र आज्ञाकारी हो।
यसले एक पागल परिदृश्य सिर्जना गर्दछ जहाँ नारिसिस्ट मालिक हो र शिकार दास (आर्थिक, व्यावहारिक र भावनात्मक हिसाबले)।
पीडित वास्तवमा सबै अभिप्राय र उद्देश्यहरूको दास हुन्छ जबसम्म उनीहरू त्यस्ता विषाक्त बन्धन तोड्न सक्ने शक्ति र साहसलाई निम्त्याउँदैनन्।
'केहि गलत छ' महसुस भइरहेको छ
नारिसिस्टहरुमा कुनै समानुभूति छैन र उनीहरुका वरिपरि भएका मान्छेहरुको खर्चमा उनीहरुका अहंकार फीड हुन्छन्, विशेष गरी तिनीहरुसंग तिनीहरुसंग सम्बन्ध छ।
उनीहरूको उपचारको लामो समय सम्म सम्पर्क पछि, पीडितले दु: ख, एक्लोपन र निराश महसुस गर्दछ जुन सँधै गल्ती भइरहेको छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्न सक्षम हुनु बिना नै हो।
यो भित्री शून्यको जस्तै महसुस हुन्छ जसको समाधान छैन, निको हुने कुनै सम्भावना छैन, र पीडितलाई 'केही बन्द छ' भन्ने महसुस गराउँदछ।
जब ऊ / उनीले यो अभिव्यक्त गर्न प्रयास गर्दछन्, त मा निषेधकर्ताको उत्तर यो हो कि यदि केहि गलत छ भने, यो पक्कै पनि शिकार हो।
एक मादक पदार्थको साथ एक सम्बन्ध मा एक धेरै विषाक्त अनुभव हो। यो कुनै ट्रामा विशेषज्ञहरु द्वारा एक युद्द वा सम्प्रदायमा रहेको तुलना गरिएको छ।
त्यहाँ ब्रेन धुनेको एक स्तर छ जुन पीडितलाई बेकार र निराशाजनक महसुस गराउने बनाउँदछ ताकि ऊ / उनी ओन्कालिसिस्टसँग रहन्छ।
बन्धन तोड्नु धेरै गाह्रो हुन्छ, किनकि प्राय जसो बाल्यकाल मुद्दाहरूमा यो जोडिएको हुन्छ। यो यसको लागि लायक छ, यद्यपि यसले पीडितका लागि आवश्यक केही फिर्ता ल्याउँदछ: जीवनमा आशा।
एक नारसिसिस्टले उनीहरूका पीडितहरूलाई निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने भावनाहरूको प्रकारहरूबारे थाहा पाउँदा तपाईं एक व्यक्तिसँग धेरै नजिक हुँदा यस पहिचानमा सहयोगी हुन्छ।
यदि तपाईंले यी कुनै भावनाहरू आफैंलाई भन्दा धेरै पटक अनुभव गरिरहनु भएको छ वा तपाईंले पहिलेभन्दा बढी तीव्रताका साथ अनुभव गरिरहनुभएको देख्नुभयो (पछि हामी सबै समय-समयमा यी भावनाहरू मध्ये केही अनुभव गर्दछौं), तपाईं कहाँबाट आएको हो भनेर तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ।
यदि नयाँ व्यक्तिले तपाईंको जीवनमा प्रवेश गरेको छ भने - विशेष गरी नयाँ रोमान्टिक पार्टनरको सम्बन्धमा - तपाईं होसियारीसाथ पैदल हिँड्न चाहानुहुन्छ र अन्य संकेतहरू खोज्न सक्नुहुन्छ जुन तिनीहरू एक नारिसिस्ट हुन सक्छन्, चाहे घातक , गुप्त , वा मध्यम ।
यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं एक नशीलावादीको साथ संलग्न हुन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको पञ्जाबाट उम्कने उत्तम तरीका भनेको उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा काट्नु हो र कुनै सम्पर्कमा जानु हुँदैन।
जब तपाइँ सबै कुराको लागी दोषी हुनुहुन्छ
जब म चाहन्छु म रोउन सक्दिन
कसरी उसलाई थप स्नेह देखाउन को लागी
एलिजाबेथ एन 'लिजा' पावेल
मेरो प्रेमीले मलाई सानो कुराको बारेमा झुट बोली
कसरी थाहा छ कि यो वासना वा माया हो
यदि कुनै केटीले तिमीलाई चुम्बन गर्छिन् भने उनी तिमीलाई मन पराउँछन्